Waaxda Ganacsiga waxay soo bandhigtay Xafiiska cusub ee Badbaadada Hubka iyo Kahortagga Rabshadaha - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Waaxda Ganacsiga waxay daahfurtay Xafiiska cusub ee Badbaadada Hubka iyo Kahortagga Rabshadaha
Waaxda Ganacsiga waxay daahfurtay Xafiiska cusub ee Badbaadada Hubka iyo Kahortagga Rabshadaha
Xafiiska wuxuu diirada saari doonaa rabshadaha qoryaha bulshada oo si aan kala sooc lahayn u saameynaya bulshooyinka midabka leh
Shalisa Hayes waa hooyo leh howl.
Bishii Ogos 2011, waxay la kulantay xanuunkii ugu xumaa ee ay hooyadu dareemi karto - luminta wiilkeeda yar oo ku dhacay meel qaldan waqti khaldan. Billy Ray Shirley III waxay jirtay 17 sano. Waxaa la toogtay oo ladilay isagoo ka tagaya xaflad ka dhaceysa Tacoma, WA.
Wixii Hayes, tani maahan burqashadeedii ugu horreysay ee rabshadda qoryaha. Waxay aabaheed ku wayday dil markii ay ahayd gabadh yar. Murugada ka timaadda khasaaraha noocan ahi waxay noqon kartaa mid curyaan ah, laakiin Hayes ayaa tobankii sano ee la soo dhaafay ku qaatay dhaqdhaqaaq. Hayes ayaa hogaamiyay qarashka xarun bulsho oo cusub oo laga dhisayo xaafada Tacoma ee xaafada eastside wuxuuna noqday cod hormuud u ah joojinta rabshada qoryaha ee bulshada inta badan ay iska indhatiraan warbaahinta iyo dadka siyaasada dejiya.
"Sanado aad u tiro badan, bulshooyinka midabka leh waxay arkeen falcelin aan fiicnayn oo ku saabsan rabshadaha qoryaha, oo ka soo horjeedda mid ku xididaysan ka hortagga," ayuu yiri Hayes. Maadaama aan nahay qof ay si toos ah saameyn ugu yeesheen rabshadaha qoryaha dhowr jeer, isla markaana ka shaqeeyay sidii loo yareyn lahaa, waxaan u baahanahay inaan siino bulshooyinkeena kheyraadka lagama maarmaanka u ah inay gacan ka geystaan ​​sidii loo beddeli lahaa isbeddellada socda ee waxyeellada iyo dilaaga ah.
Cusub ee la abuuray Xafiiska Badbaadada Hubka iyo Ka Hortagga Rabshadaha Wasaaradda Ganacsiga ayaa hoggaamin doonta dadaal gobolka oo dhan ah si loo mideeyo faragelinta ku saleysan caddaynta iyo xeeladaha ka hortagga si wax looga qabto rabshadaha hubka ee bulshada. Shaqada xafiiska waxaa lagu jiheyn doonaa dadka halista ugu badan leh ee dembiilayaasha iyo dhibbanayaasha bulshada halista ugu badan leh. Xafiiska wuxuu ku dhexjiraa xoogaa yar oo qaranka ka mid ah waxaana lagu aasaasay hoosta sharci uu maalgeliyey Sen. Manka Dhingra sannadka 2020. Waxay hadda leedahay miisaaniyad hawleed sanadle ah oo dhan $ 421,000.
akhri sheeko buuxda on Meheradda Dhexe ee Ganacsiga.
nabadgelyada hubkaWar-saxaafadeedkahortaga rabshadaha
← Gobolku wuxuu bilaabayaa wareegga cusub ee deeqaha ganacsiga yar yar ee Shaqada Washington Maarso 29 Mutadawiciinta Gobolka Washington ee Waaxda Tamarta Mareykanka ayaa horseeday hindisaha lagu jaangooyay sida korontada u soo sheegaan maqnaanshaha →